जोलीको प्रभावशाली भाषण - आजकी नारी - नारी
जोलीको प्रभावशाली भाषण
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं अधिवेशनमा नेपाली चेली जोली अमात्यले सम्बोधन गरेकी छिन् । अमात्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) स्थापना भएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा ‘भविष्यको कार्य’ नारा रहेको उक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गरेकी हुन् ।
उनले गत अप्रिल १० मा उक्त उच्च स्तरीय बैठकमा सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बोधन गर्ने सुअवसर पाएकी हुन् । जोली हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मेजर ग्रूप फर चिल्ड्रेन एन्ड युथको सचिवालयमा कार्यरत छिन् ।
उनले सम्बोधनका क्रममा भनिन्–किन हरेक वर्ष १ दशमलव ७ खर्ब डलर सेनामा खर्च गरिन्छ ? किनभने आर्थिक नमुनाहरूले युद्धका उपकरण तथा कल्याणका बीचको भेद बताउन सक्दैनन् ।
अमात्य राष्ट्रसंघको इतिहासमै युवा सम्मेलनकी युवा अध्यक्ष पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली थिइन् । दुई वर्षअघि जोलीले विश्वका युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै दोस्रो पटक पुनः उनले राष्ट्रसंघ हिउँदे युवा सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् ।
भाद्र १८, २०७२ - कसरी बन्ने प्रभावशाली व्यक्तित्व ?
मंसिर १, २०७१ - प्रभावशाली जया
मंसिर १, २०७१ - कत्तिको प्रभावशाली हुनुहुन्छ ?
आर्याको सहभागीता भाद्र १८, २०७६
गोल्ड मेडलिस्ट मल्लिका भाद्र ३, २०७६
बेलायतमा नर्सिङको उच्च तहमा कल्पना श्रावण २९, २०७६
एक्सलेन्ट तृष्णा श्रावण १४, २०७६
मिस टिन प्रदेश–१ श्रावण १०, २०७६
बहुप्रतिभाकी धनी सिर्जु श्रावण ८, २०७६